China gbanwetụrụ bitumen waterproof akpụkpọ ahụ mmepụta akara - China Xinle Hongtai Waterproof
Asphalt waterproofing akpụkpọ ahụ akụrụngwa
China gbanwetụrụ bitumen waterproof akpụkpọ ahụ mmepụta akara
Brand aha: HONGTAI
Mgbe-sales Service Ese: Engineers dị ka ọrụ ígwè esenidụt
Product aha: SBS / APP korota waterproof akpụkpọ
Voltaji: 380v / 50HZ
Ikike: 3000-15000square mita / ụbọchị
Main Onodi: 90m * 12m * 8m
Abịakọrọ ikuku: 0.7Mpa, 0.6M3 / min
Dị ka gị chọrọ
90 ụbọchị n'elu-anata ego
Gbanwetụrụ bitumen waterproofing akpụkpọ ahụ na ọtụtụ-eji na ulo oru na obodo ụlọ, dị ka ụlọ, okpuru ulo, ụlọ mposi, akwa, ogige, igwu mmiri, ọwara maka waterproof na moistureprof. Bitumen bụ a hydrocarbon na-kere ndammana si crude mmanụ. Ọ bụ a bara uru na carbon store na anaghị n'ịwa greenhouse aputa, oga. The akpụkpọ ahụ bụ ya mere a na-adigide ụzọ nke na-akpakọba carbon na Earth ala.
The dum na-arụ ọrụ pụrụ iji ụkpụrụ kewara 3 nzọụkwụ.
1. Iji mix bitumen, roba ntụ ntụ, talcum ntụ ntụ, enginee mmanụ na ụfọdụ ndị ọzọ ngwaọrụ site na agwakọta tankị (Ịgwakọta tank kwesịrị nọ na-ekpo ọkụ site conduction mmanụ) .Onye okokụre mixtures nwere ike na-akpọ bituminous mixtures.
2. The bituminous mixtures ga-deliveryed n'ime mkpuchi pools.Then isi ihe onwunwe (mkwado) ga-ntekwasa na bituminous mixtures.At ikpeazụ, ntekwasa mkwado ga-kpuchie site Pee film ma ọ bụ ájá ma ọ bụ ndị ọzọ materials.At na oge ahụ, bitumen akpụkpọ ahụ mbido akpụ.
3. The okokụre ngwaahịa ga-mma site na mmiri na ikuku, mgbe a ga-akpọrepu site autowinder.
Mbukota: ọ bụla akụkụ na-ọma juru n'ọnụ zere emebiri n'oge njem.
Mbupu: Tianjin mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Q1: Ị na-eji a kpọmkwem na-eweta maka ngwaọrụ?
Ee, anyị nwere ike na-enye ngwaọrụ maka ọ dị, gị ahịa anyị nwere ike ịzụta ebule ihe ha ahịa.
Q2: Olee ogologo bụ na-arụ ọrụ ndụ gị igwe?
The-arụ ọrụ ndụ bụ ihe karịrị afọ 15 na akwụkwọ ikike bụ 1 afọ.
Q3: Gịnị bụ gị na nkà na ụzụ ozi?
Anyị ga-eziga anyị injinia na anyị ahịa si factory ịgbanwe igwe ruo mgbe anyị
ahịa nwere ike na-arụ ọrụ ha.
Q4: Ị ụfọdụ videos ebe anyị pụrụ ịhụ akara amị?
Ee, anyị nwere ike inye ụfọdụ videos eme ahịa anyị ụtọ.
Previous: Self-nyagide korota waterproofing mpempe akwụkwọ Ihe n'ihi na mgbidi waterproof
APP gbanwetụrụ bitumen waterproofing
Asphalt waterproofing akpụkpọ ahụ Equipment
bitumen akpụkpọ ahụ Kwuonụ Line
bitumen akpụkpọ ahụ Production Line N'ihi Ft
SBS gbanwetụrụ Bituminous Bridge waterproofing
Waterproof akpụkpọ ahụ Production Line
Waterstop akpụkpọ ahụ Production Line
3mm 4mm 5mm SBS bitumen Waterproof mpempe akwụkwọ Materi ...
Automatic convolver / ntụgharị nke na-eme bituminou ...
China OEM APP gbanwetụrụ Bituminous waterproofing ...
3mm 4mm SBS / APP gbanwetụrụ korota Waterproof Ọ ...
3mm 4mm Asphalt waterproofing mpempe akwụkwọ Ihe ma ...
Gbanwetụrụ Asphalt waterproofing akpụkpọ ahụ Machine